2019516africafocused gold miner metallon corporation is demanding nearly 132 million it says it is owed by zimbabwes central bank, legal documents showed.
2019414bloomberg gold producer metallon corpalted output at three of its four mines in zimbabwe because of mounting debts, as a south african newspaper reported the owner is considering selling the operations.
2019517metallon corpwhich acquired lonmin plcs gold mines in zimbabwe in 2002, wants an additional 5million because the central bank prevented it from externalizing 2 of revenue as a.
2019415gold producer metallon corp halted output at three of its four mines in zimbabwe because of mounting debts, as a south african newspaper reported the owner is considering selling the operations.
Zimbabwe miners strike paralyzes metallon gold mineor almost two weeks now, workers of arcturus mine, one of the five active mines in the country owned by metallon gold zimbabwe, the largest gold producer, have been on strike, demanding backdated pay, as a condition to returning to work.
Metallon gold zimbabweost a reviewmining consultants and shaft sinkers mining houses mining contractors a metallon group company creating a golden future address 1st floor, block 6, arundel office park arundel arundel harare zimbabwe telephone 263 visit our facebook page iphone app android app made in zimbabwe.
201967a representative for metallon declined to respond to a request for commentetallon is zimbabwes largest gold mining company, operating four gold mines throughout the countryhe company, which is headquartered in london, was founded in 2002 when mzi khumalo acquired lonmins zimbabwean gold assets for 15 million.
2016224for almost two weeks now, workers of arcturus mine, one of the five active mines in the country owned by metallon gold zimbabwe, the largest gold producer, have been on strike, demanding backdated pay, as a condition to returning to workhe.
201797gold production in 2016 was 94 212 ounces and the budget for 2017 is 115 000 ouncesccording to the group, metallon is targeting on increasing gold production significantly through ambitious expansion plans across all zimbabwean operations and developing gold mines in tanzania metallon gold restructures newsday zimbabwe.
Metallon gold zimbabwe pvt ltd, owners of how mine and metallon gold zimbabwe pvt ltd, owners of how mine near bulawayo and other gold mines in the country, has been taken to court on allegations of externalising more than 30 million.
Metallon cedes mazowe unit to sa firm oct 26, 2015 mazowe is the biggest among the former lonrho zimbabwe gold mines located in bulawayo, mutare, acturus, shamva and mazowe, which is.
2019415gold producer metallon corp halted output at three of its four mines in zimbabwe because of mounting debts, as a south african newspaper reported.
2019528at least nine illegal gold miners have died in zimbabwe after they detonated explosives underground and were trapped at a mine owned by unlisted londonheadquartered metallon.
201797zimbabwes largest gold producer, metallon gold, is restructuring its business, where each of the four operating mines will now operate as separate entities, as part of a strategy to increase.
Metallon Moves To Protect Zimbabwe Gold Mines
Metallons companies owe tens of millions of dollars to some of its service providersn february, the zimbabwe electricity transmission and distribution company zetdc took metallon corporation to court to compel the gold miner to settle a 9million bill for power supplied to three of its mines.
2019616zimbabwes biggest gold producer sued the countrys central bank for 132m because it has been paying for the metal in a local quasicurrency rather than us dollars, highlighting the business sectors dissatisfaction with the nations financial regime metallon corporation, which acquired lonmin gold mines in zimbabwe in 2002, wants an additional 5 because the central bank.
Zimbabwes biggest gold producer, metallon gold has sold off its arcturus mine to tawanda nyambirais investment company, tn securities at an undisclosed price arcturus mine has a proven gold resource of one million ouncesetallon has ceded all of its rights and obligations concerning arcturus mine to tn securities as part of the disposal process.
2019516johannesburg reuters africafocused gold miner metallon corporation is demanding nearly 132 million it says it is owed by zimbabwes central bank, legal documents showed on thursday, as the countrys mining sector grapples with a severe dollar crunch.
Technical services manager, chief surveyor metallon gold zimbabwe february 1970 may 2012 42 years 4 monthsazowe mine, arcturus mine and head officeine survey, assay, geology, safety.
2019414gold producer metallon halted output at three of its four mines in zimbabwe because of mounting debts, as a south african newspaper reported the owner is considering selling the operations.
2016420zimbabwes largest gold producer, metallon corporation, plans to spend 16,3 million in capital expenditure at its redwing mine over the next five.
2019418zimbabwes largest gold producer, metallon corporation, has suspended production at three of its four local mines due to mounting debtszi godfrey khumalo aka.
Metallon gold reportedly ceased operations at three of its four mines in zimbabwe because of mounting debts, according to south african media reportshe companys operations are being hindered by an acute shortage of foreign currencyhe problem has been worsened by the countrys regulations which stipulate that gold mining companies sell their metal to.